Siyaasadda Gaarsiinta - Molooco
Fiiro 1: Annaga mas'uul kama nihin haddii xirmo aan la bixin karin sababtuna ay tahay maqnaanshaha, dhammaystir la'aanta ama macluumaadka khaldan ee loo socdo. Fadlan qor faahfaahinta dhoofinta saxda ah markaad hubinaysid. Haddii aad ogaato inaad qalad ku samaysay faahfaahinta raridaada, si naxariis leh noogu soo dir i-meel [emailka waa la ilaaliyay] sida ugu dhaqsaha badan.
2. Fariin noogu soo dir at [emailka waa la ilaaliyay]molooco.com taasoo muujineysa ujeeddada loo celinayo shayga. Fadlan ku dar waxyaabaha soo socda e-maylka:
• Fadlan hubi in haddii aad soo celinayso alaabta (alaabada), ay tahay inay ku sugan yihiin xaalad kaamil ah, oo aan la adeegsan, aan la maydhin iyo baakadaha ay ku jiraan ee asalka ah (haddii ay khuseyso)
Molooco.com wuxuu dammaanad ka qaadayaa in shey kasta oo inaga soo gato dib loogu soo celin doono gudaha 7 maalmaha shaqada, dib-u-iibsiga dammaanadda lacag-soo-celinta.